Nayakhabar.com: थाहा पाईराख्नुस, नयाँ ठाउँमा जाँदा किन निद्रा लाग्दैन ?
थाहा पाईराख्नुस, नयाँ ठाउँमा जाँदा किन निद्रा लाग्दैन ?
काठमाडौ । निद्रा मानिसका लागि निकै आवश्यक छ । यसले शरीरलाई स्वस्थ्य राख्नुका साथै थकान मेटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर कतिपय अवस्थामा नयाँ ठाउँमा जादा होस् वा ओछ्यान बदल्दा, हामीमध्ये धेरैलाई निद्रा नलाग्ने समस्याले सताउँछ ।
आखिर नयाँ ठाँउमा जाँदा पहिलो रातमा हामीलाई किन निद्रा लाग्दैन त, थाहा छ ?
करेनट वायोलोजीमा नामक जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार कुनै पनि नयाँ ठाउँमा होस् वा नयाँ वातावरणमा जादाँ हाम्रो मस्तिकको आधा भाग सँधैभरी सतर्क अवस्थामा बस्ने गर्छ ।
यसले सुतेको अवस्थामा हामीलाई नयाँ माहोलबारे अदृश्य रुपमा जानकारी गराइरहेको हुन्छ । हामीलाई ब्युँझाइरहेको हुन्छ । जसको कारण ओछ्यान बद्लिएको पहिलो रात हामीलाई निद्रा लाग्दैन ।
प्रायः सबै मानिसलाई नै पहिलो रातमा यस्तो समस्या किन हुन्छ त ? जान्नकै लागि बेलायतस्थित ब्राउन युर्निभसिटीका अनुसन्धानकर्ताको समुहले ३५ जना स्वस्थ मानिसमा एउटा अनुसन्धान गरेको थियो । उनीहरुले हप्ता दिनको फरकमा ती मानिसहरुको पहिलो दुई रातको विस्तृत अध्ययन गरेका थिए ।
अध्ययनबाट उनीहरुले दिमागको दायाँ भागको तुलनामा बायाँ भाग निरन्तर व्युझिरहने तथा सर्तक रहने पाएका थिए ।
त्यसैगरी, उक्त भाग नौलो ध्वनी प्रति संवेदनशील रहने हुदाँ नौलो ठाँउमा दिमागले सम्भावित खतराबारे जानकारी दिइरहने गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागको थियो ।